Pastor umthandazo sina funny | Apg29
Iphephandaba i nemini fun of umfundisi ukufunda ifowuni ngoxa wayethandaza.
Usuku kwimidiya yomphakathi wayitwabulula surf mobile umfundisi ngayo ngexesha abekuhambisa ibandla ngomthandazo. Ndabhala nto ngayo mna kuba ndandicinga umfundisi ukuze ufunde bönämne ngoxa wayethandaza. kunjalo kakhulu. Day ubhala kwinqaku entsha:
- Kwakukho umhlobo umfundisi Ohio, onomfazi umhlaza, utsho Perry Stone.
- Ndathatha ifowuni yam Messa kuye.
Ngoko impendulo yakhe bonke abo bacinga ukuba imeko ohlekisayo kukuba kukho into ohlekisayo ngayo konke konke.
- Wena wenza wonwabe ngeendleko yam umfundisi ngumfazi unomhlaza.
Umfundisi ucacisa ngendlela YouTube ividiyo entsha.
Ngamanye amaxesha kufuneka ufumanise izinto på¨varför kwenzeka kwaye oko ukuze izigqibo. Isenokuba kungabi njengoko kubonakala ukuba.
Usuku mhlawumbi kufuneka uxolo?
Maxa wambi kuye kwenzeka ukuba abantu ngeenxa zonke kum baye ngela kanye ukuba sahlala iselula yam. Kuye kwenzeka kabini ukuba Wayengena emotweni. Kwaye ngoko ke surfed nkqu ngeselula okanye wakhangela kuwo. Kwanele ukuba mna kuyo baze bagqiba ukuba ndiza igagasi okanye babukele.
Nokuba kungenxa mna andazi, kodwa ndiyarhana ukuba nomona ngenxa site yam blog Apg29. Ukongezelela ekugcineni siphefumlelana nabantu ndisebenzisa mobile phone yam ukuhlaziya yaye umsebenzi site yam blog. Omnye wabo ke wacela uxolo, enye na.
Ngoku kufuneka ukuba ube nomona. Unako kwakhona ukuqala blog wawaneka ezilungileyo zobuqaqawuli likaYesu Kristu!